HomePage – TimeLine Layout – SoShwe
Pocari Sweat ချစ်သူတွေအတွက် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်လေး ထပ်မံရောက်ရှိလို့လာပါပြီ . . . 900mL ဘူးကြီးလေးဘူး (သို့) အခြားနှစ်သက်ရာ Pocari Seeat ရှစ်ဘူးဝယ်ယူရုံနဲ့ ခွက်လှလှလေးတစ်ခွက် လက်ဆောင်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Promotion ကို City Mart ၊ Market Place ၊ Ocean ၊ Capital ၊ Sein Gay Har ၊ Orange ၊ Gamone Pwint နဲ့ Fuji တို့မှာ ဝယ်ယူရင်း ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် . . . လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေက အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားတာမို့ …
တန်ဟက်ဂျ်က ယူနိုက်တက်မှာ ၃ ယောက်တန်းတိုက်စစ်ကို ပုံဖော်ချင်နေတယ်လို့ မန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ရော်နယ်ဒိုကို ဗဟိုတိုက်စစ်နေရာမှာ ကစားစေမှာဖြစ်ပေမယ့် ကစားသမားရဲ့ အသက်အရွယ်ကြောင့် အနာဂတ်မှာ ၃ ယောက်တန်းတိုက်စစ်ရဲ့ အလယ်နေရာအတွက် ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ကို အားကိုးဖို့ တန်ဟက်ဂျ်က ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ရာသီအကြိုပွဲစဉ်တွေမှာ ဒီပုံစံကို တန်ဟက်ဂျ်က အသုံးပြုသွားဖို့လည်း ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ကတော့ ယူနိုက်တက်အတွက် စတင်ကစားပေးချိန်မှာ တိုက်စစ်မှူးတဦးအဖြစ် ကစားခဲ့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာတော့ တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားပုံစံကို ပြောင်းလဲကစားခဲ့ပါတယ်။ တန်ဟက်ဂျ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘယ်တောင်ပံမှာပဲ ကစားချင်တဲ့ ရက်ရှ်ဖို့ဒ်အတွက် အနည်းငယ်တော့ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်နည်းပြဟောင်း မော်ရင်ဟိုလက်ထက်တုန်းကတော့ ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ကို ဗဟိုတိုက်စစ်မှူးအဖြစ် မသင့်တော်ဘူးလို့ ရှုမြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ရဲ့ …
တရုတ်နိုင်ငံ Zhejiang ဒေသမှ အမည်မဖော်လိုသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ “Blind Date” လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးတဲ့ ကြင်ယာဖက်နဲ့ တွေ့ဆုံမယ့် စားသောက်ဆိုင်သို့ ဆွေမျိုး ၂၃ ယောက်လုံးကို တွေ့ဆုံဖက်အမျိုးသားရဲ့ ရက်ရောမှုကို စမ်းသပ်လိုတာကြောင့် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကြင်ယာဖက်တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ အမျိုးသားတွေက ကုန်ကျစရိတ်ကို ပေးချေလေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အမျိုးသမီးလေးက သူမရဲ့ဆွေမျိုးတွေကို တစ်ပါတည်း ခေါ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲ၌ တွေ့ဆုံဖက်နှစ်ဦးရဲ့ စားသောက်စရိတ်အပြင် အမျိုးသမီးရဲ့ ဆွေမျိုးတွေ စားသောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တရုတ်ငွေ ယွမ် ၁၉,၈၀၀ ကျသင့်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ၂,၉၄၇ ကျပ် ကျသင့်ပြီး အမျိုးသမီးရဲ့ ဆွေမျိုးတွေဟာ စားသောက်စရာတွေအပြင် ဆေးလိပ်တွေနဲ့ ယမကာတွေကိုပါ စိတ်ကြိုက်မှာယူ …
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိကြစမြဲပါ။ အချို့သောအားနည်းချက်တွေက ပေါ်လွင်ထင်ရှားတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် အချို့သောအားနည်းချက်တွေကတော့ လူတွေကြားထဲမှာလည်း တော်တော်လေးကို ထင်ရှားနေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအားနည်းချက်တွေအပေါ်မှာ စိတ်မပျက်ဘဲ အရှိကိုအရှိတိုင်း မိမိစိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပဲမဟုတ်ပါလား။ ဘရာဇီးနိုင်ငံက အသက် (၄၁) နှစ်အရွယ် Orc သည် ၄င်းရဲ့ထူးခြားဆန်းပြားသည့် သွားနဲ့လိုက်ဖက်ညီအောင် မျက်နှာကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ထိုကဲ့သို့ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းအတွက် ပေါင် (၄၀၀) အထိ အကုန်ကျခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဘရာဇီးနဲ့ ပါရာဂွေးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရှိ Iguatemi မြို့လေး၌ နေထိုင်သည့်အဆိုပါအမျိုးသားသည် သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတက်တူးကို အသက် (၁၅) နှစ်အရွယ်၌ ရေးထိုးခဲ့ပြီး အသက် (၃၅) နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်၌မူ ၄င်းထံရှိနေသည့်သွားဖြင့်လိုက်ဖက်အောင် မျက်နှာကိုတက်တူးဖြင့် အနုပညာဆန်ဆန် ရေးထိုးခြယ်သခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သွင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်၍လည်း …
Samsung ချစ်သူတွေအတွက် အတန်ဆုံး၊ အမိုက်ဆုံး၊ အကြမ်းဆုံးပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချပေးမယ့် “Samsung LIVE Sales” ကြီးလာပါပြီနော် . . . ဇူလိုင် (၁) ရက်နေ့မှာ အလန်းစားဖုန်းတွေနဲ့ ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့မှာ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းအထိ ငွေသားလက်ဆောင်ပြန်ရမယ့် အထူးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ရောင်းချပေးသွားပါမယ်နော် . . . အဲ့ဒါတွေအပြင် လက်ဆောင်တွေရမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဂိမ်းအစီအစဉ်တွေ၊ Lucky Draw အစီအစဉ်တွေလည်း အများကြီးပါဝင်မှာဆိုတော့ အရမ်းမိမိုက်နေပြီပေ့ါ . . . LIVE Sales အချိန်တွင်းမှာပဲ ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရမှာဆိုတော့ လုံးဝလက်လွှတ်လို့မဖြစ်ဘူးနော် . . . …
လစာထုတ်ပြီးမှ ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ Samsung ချစ်သူတို့အတွက် လစာလဲရ . . . Promotion လဲရ . . . ဒါတွေအပြင် ငွေကျပ် (၃) သိန်းအထိ သက်သာနိုင်မယ့် Samsung Days Promotion လာပါပြီ . . . Samsung ရဲ့ဖုန်းလေးတွေ ဝယ်ယူတဲ့အခါတိုင်းမှာ ငွေကျပ် ၂ သောင်း မှ ၃ သိန်း အထိ ငွေသားလက်ဆောင် ပြန်လည်ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် . . . Promotion ကာလကတော့ – ဇွန်လ ၂၇ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် …
YouTube ဆိုတာ ကမ္ဘာတစ်လွှား လူသုံးအများဆုံး ဖျော်ဖြေရေးအရင်းအမြစ်ကြီးတစ်ခုလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ YouTube ပေါ်မှာ ဗဟုသုတရစရာတွေ ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ Video Contents တွေ သန်းနဲ့ချီ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ YouTube မှာ တစ်လတစ်လ ဝင်ကြည့်သူ သန်းထောင်နဲ့ချီ ရှိနေတာပါ။ တစ်ဖက်မှာလည်း YouTube သုံးတာကို ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်း အတော်များများ ရှိပါတယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေက YouTube ကို ယာယီကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပေမယ့် တချို့နိုင်ငံတွေကတော့ ပြန်ဖွင့်မပေးတော့ဘူး ထင်ရလောက်အောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံတွေထဲကမှ YouTube သုံးစွဲမှု ပိတ်ပင်ထားတဲ့ နိုင်ငံ ၅ ခု အကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ …
၁။ ထမင်းဝိုင်း။ ကောင်းမွန်သည့် ထမင်းဝိုင်း၌ အစားအသောက်၊ သောက်ရေတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ထမင်းဝိုင်းမှ ဟင်းပန်းကန်များကို တူညီသည့်ဘက်တစ်ခုတည်းကိုသာ ပေးသင့်သည်ဟုဆိုကြပြီး “ဘယ်ဘက်ကိုပေးလိုက်။” ဟု ပြောချိန်၌ အခြားသောတစ်စုံတစ်ယောက်က ညာဘက်ကိုသာရွေးချယ်၍ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုစည်းမျဉ်း ပေါ်ထွန်းလာသည်ဟုလည်း ဆိုကြပါတယ်။ ၂။ ကားတံခါးဖွင့်ခြင်း။ ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှ ကားတံခါးကို ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့်ဖွင့်ခြင်းက မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားနို်င်ချေပိုမိုများပြားပြီး ဘေးမှလာသောကား၊ စက်ဘီးများနဲ့ ထိခိုက်မိနိုင်ချေရှိပါတယ်။ ညာဘက်လက်ဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှ ကားတံခါးကိုဖွင့်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အားယူမှုကြောင့် အနောက်ကိုပြန်မြင်နိုင်ပြီး အဆိုပါစည်းမျဉ်းကို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ၃။ ဖုန်းပြောခြင်း။ ဖုန်းပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ညာဘက်လက်ကိုအသုံးပြုပြီး ညာဘက်နားဖြင့်သာ နားထောင်သင့်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့နားထောင်ခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အသံစနစ်ကို …